A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Firefox 81 | Site na Linux
N'oge na-adịbeghị anya e kwupụtara ntọhapụ ọhụrụ version nke Firefox 81, nke na-abịa na ụfọdụ mgbanwe na-adọrọ mmasị na-elekwasị anya na gburugburu onye ọrụ, yanakwa ndozi nke onye na-agụ faịlụ PDF agwakọtara na ihe nchọgharị ahụ.
Na mgbakwunye na ihe ọhụrụ na ndozi ahụhụ, na ụdị ọhụrụ a nke Firefox 81 10 ka emezigharịrị, nke 7 akara dị egwu.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 81
2 Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 80 ọhụrụ na Linux?
Main atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 81
Na ụdị ọhụụ nke ihe nchọgharị a a na-atụ aro ihu ọhụụ iji ihuchalu tupu ibipụta, nke kariri imeghe na taabụ dị ugbu a ma dochie ọdịnaya dị (interface preview interface gara aga dugara oghere nke windo ọhụrụ).
Ngwaọrụ maka ịhazi nhazi peeji na ibipụta ntọala ewepụla site na ngalaba elu gaa n'aka nri, nke gunyere nhọrọ ndị ọzọ dịka ịchịkwa ma isi isiokwu na nzụlite ka ebipụtara, yana ikike ịhọrọ onye nbipute.
Ejikọtakwara interface interface PDF ejiri (Ihe nnọchianya edochila anya ya, ejirila ọkụ mee ihe maka ogwe ngwaọrụ). Agbakwunyere nkwado maka usoro AcroForm iji jupụta n'ụdị ntinye ma chekwaa PDF nke rụpụtara site na data ntinye onye ọrụ.
Tụkwasị na nke ahụ, e nyere ikike ịkwụsịtụ ụda na vidiyo. na Firefox n'iji bọtịnụ multimedia pụrụ iche na keyboard ma ọ bụ ekweisi na-ege ntị na-enweghị clicks. Enwekwara ike ijikwa playback site na izipu iwu site na iji usoro MPRIS ọ na-arụ ọrụ ọbụlagodi na ekpuchichiri ihuenyo ma ọ bụ ọ bụrụ na mmemme ọzọ nọ n'ọrụ.
Na mgbakwunye na isi ihe ọkụ na nkpuchi, agbakwunyela isiokwu Alpenglow ọhụrụ nwere bọtịnụ nwere agba, menus na windo.
Maka ekwentị mkpanaaka nwere Adreno 5xx GPU, ewezuga Adreno 505 na 506, WebRender compositing engine gụnyere, nke edere na asụsụ nchara na-enye gị ohere ịbawanye ọsọ nsụgharị ma belata ibu CPU n'ihi na ị na-enyefe nsụgharị nsụgharị nke ọdịnaya peeji nke n'akụkụ GPU, nke etinyere site na ndị na-agba ọsọ na GPU.
Emegola akara ngosi ọhụụ maka ilele eserese Foto dị n'ime Foto a.
Gbaa mbọ hụ na ogwe ibe edokọbara nwere saịtị kacha mkpa ga - enyere aka ozugbo ịbubata ibe edokọbara na Firefox.
Agbakwunyere ikike iji lelee xml, svg na faịlụ webp na Firefox.
Ofu nke na resetting ndabere asụsụ ka English mgbe emelite nchọgharị na asụsụ mkpọ arụnyere.
Agbakwunyere nkwado maka ọkọlọtọ "nbudata-nbudata" na njirimara nke sandbox ihe mmewere igbochi nbudata akpaghị aka bidoro na iframe.
Agbakwunyere nkwado maka usoro nhazi usoro HTTP na-enweghị ọkọlọtọ na filenames na oghere na-enweghị ruturu.
Maka ndị na-ahụ ihe anya, nkwado dị mma maka ndị na-agụ ihuenyo na njikwa na-achịkwa ọdịnaya HTML5 mkpado / vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Firefox 81
E weputala ụdị ọhụrụ nke Ubuntu Touch OTA-13 ma ndị a bụ akụkọ ya